Great turrets for autumn and winter tinker | Mapeji evaravara ehurukuro
Mwenje yechando yekumatenga nemapapiro emapapiro
Mwenje dzemhepo kubva kune Zviuru uye Rimwe Nyeredzi
Mwenje yakagadzirwa neimba vane chavo chavo chakanaka. Muzhizha vanozununguka pamadziro munharaunda dzakasviba, mumwando uye munguva yechando vanogadzirawo imba yedu kana tafura yemabiko, kunyange kana pasina mhepo.
Hurricanes mukuvhuna sechishongo
Ichokwadi, ona mwenje unoitwa kumba munguva yekuvhuvhura uye yechando semucheka kunze kwemukova, somuenzaniso, pamusuo, mukuru. Chikamu chakanaka ndechekuti zviri nyore, imwe Kugadzira mhepo inenge iwe pachakosaka kunyange vana vanogona kuinakidzwa uye vanobudirira chiitiko chinoshamisa pasina ruzivo rwakapfuura. Kana izvozvo zvisiri kukurudzira ...
Windlichter tinker yourself pachako
Mwenje yakagadzirwa neimba yekugumburwa
Kune imwe kumba-yakaitwa autumn wind light Paunenge uine girazi rakakodzera rekenduru. Kana iri chiedza chikuru, unogona kushandisa kuchengetedza zvirongo. Ichokwadi, iyo inowanikawo muhukuru hwakasiyana. Kunyange chirongo chinoputika chinogona kushanda zvakanaka.
Iko nguva dzose inoratidzika zvakanaka kana iwe usati uri wega chete mwenje wakagadzirwa kumba yakashandiswa pakushongedza, asi zvinenge zvitatu zvemarudzi akafanana patafura kana pahwindo sill.
Sezvo makandulo ari tealights kana-zvichienderana nehukuru hwegirazi - kunyange makenduru mashoma emagetsi.
Kwegirasi yekutenga unoda mavara akavaraidza emu maple & co. Izvi zvinofanira kuomeswa mazuva mashomanana zvisati zvaitika. Ipapo iwe unogona kuvasunga netambo yakasongedza inenge yakakomberedza girazi. Asi chenjerera: Ndapota onai kuti mashizha akaomeswa haagoni kupinda mushure memwenje moto.
Nenzira iyi iwe unogonawo zvekuitawo zvakare kupfuurira imwe nguva imwe neimwe pagirazi. Tonnetoni nyeredzi nyeredzi muchando, mashizha akaomeswa nemiriwo muchechi nezhizha. Chinhu chakanaka ndechekuti akadaro mwenje wakagadzirwa kumba inenge mari inodhura!
Zvechokwadi iwe unodawo kenduru uye girasi nekuda kweizvi. Uyezve, iwe unodawo mapepa emapepa uye mapepa ekutevera. Unofadza mu tapetenkleistermethode tarisa kunyange girazi duku, iro iwe wakanyora mumapoka mashoma, somuenzaniso, pamutambo weKisimusi.
Kubva pamapepa ekutsvaga a tealight yakagadzirirwa Zuva rezhizha rakadai semaruva akaoma, nyeredzi kana miti yemisipire inochekwa. Izvi zvinobva zvanyatsoparadzaniswa kana kuputika (zvakanaka, kana iwe ukacheka nyeredzi chete kana kungoita mazhenje, somuenzaniso) nemapapiro epurasitiki pagirazi.
Kunyange vana vaduku zvikuru vanogona kungobvarura zvimedu kana zvidimbu kubva pamapepa. Zvichida gadza ruvara runoenderana neKrisimasi. Uye kana iri kuve yakajeka, inongova nguva-nguva inopenya chiedza!
Kana iwe usingadi kuita mwenje wako kubva pagirasi, iwe unogonawo kushanda nemapepa echinyorwa. Zvisinei, izvi zvakatiomera zvikuru nevana vaduku zvikuru. Pano iwe unoda matheji, mapepa emifananidzo yakavara, pepment pepa uye mabwe anopenya. Uyewo, hongu, zvika, glue uye tealights.
Kubika mukutenga - maapuro akabikwa uye masaga muffin
Kuchengetedza mapeji okutenga kwemwaka
Kuchengetedza peji Ndezvipi mumwaka wechando shiri
Kuchengetedza peji yemwaka wechando